Uhlelo lwezinkomba zekhwalithi ye-grinder yenyama kagesi iye yaba yinkimbinkimbi kakhulu futhi enamandla. Abafundile nje ukucubungula kalula inyama, inkukhu noma inhlanzi, kodwa futhi ukugubha ushizi, imifino futhi ngisho nokulungisa ijusi elisha! Eqinisweni, namuhla kuba cishe iprosesa yokudla.
Kunokudla kwakho inyama izitsha ezingavamile, ngakho-ke inyama yendabuko ye-meat grinder ingcono kakhulu: indlela yayo elula futhi ehlala njalo, yenzelwe ukusebenza ngezinqwaba zezinto zokusetshenziswa. Kodwa i-compact "ngogesi esiteshini" iyadingeka uma kwenzeka upheka kancane futhi ungafuni ukugcina izinto eziningana ezahlukene ekhishini. Phela, izinyunithi zomhlaba wonke zihlanganisa nemisebenzi yezihlahla zemifino, imishini ye-citrus, ama-juicers nama-millers futhi ifakwe izithakeli ezidingekayo.
I-Aggregator yokudla inyama
Ukuze kusetshenziswe inyama noma inhlanzi enophejiwe ngobuncane, noma iyiphi i-grinder ye-meat grinder izokwenza, ikakhulukazi njengoba isimiso sokusebenza samamodeli ahlukile silingana.
Kukhona okukhethwa kukho, kodwa ukuthola kanjani inhlangano engenazo iphutha, "enamazinyo ezinzima" ngenyama enzima, noma indlela yokuthola uhlelo lwezinkomba zekhwalithi ye-grinder yenyama? Okokuqala, qhathanisa amandla nokusebenza kwamamodeli oyithandayo. Umthamo we-grinder yenyama kagesi awuxhomeki nje ekuvinjeni kokusebenza kwayo, kodwa futhi nangokwazi ukucubungula izinambuzane ezincane, imithanjeni, namafilimu (lokhu kuyadingeka uma inyama ingekho yekhwalithi engcono kakhulu).
I-grinder yenyama kagesi inezinkomba ezimbili zamandla: ukuqokwa nokuphezulu. Kumodi ejwayelekile, idivayisi isebenza ngamandla okuqamba ama-watts angu-240-800 amamodeli ahlukene, nokuphakama - kusuka ku-1000 kuya ku-2000 watts, inika isikhashana nje uma isebenza nge-motor evinjelwe.
Izinhlobo ezahlukene ze-grinders zenyama kagesi ziyahlukahluka ekusebenzeni kwazo: imishini eminingi iveza amakhilogremu angu-1.3-1.5 we-inyama enqotshwa ngomzuzu ngomzuzu. Uma ulungiselela i-forcemeat ngokushesha ngezinsuku ezimbalwa, qaphela izinyunithi ezithelayo. Ukuqhathanisa: i-Kenwood MG-700 enomlando eseceleni sonke sezinsimbi inesibonakaliso se-3 kg / min ngegunya eliphakeme lama-watts angu-2000.
Amakhono wedivayisi ancike ekutholakaleni kwezesekeli ezidingekayo. Masibize iqoqo eliphelele lama-nozzle "inyama" we-grinder yenyama kagesi.
I-lattices ne-perforation yezinyosi ezinomsoco wokuvumelana okuhlukile. I-disc enezimbobo ezingaba ngu-8 mm ububanzi idala inyama embi kakhulu, isibonelo, ngezinsika eziqoshiwe; ngosizo lwama-4.5 mm izimbobo, i-mincemeat itholakala nge-meatballs, ama-sauces nokugcwaliswa kwephayi; i-disk enezimbobo ezincane ezi-3 mm iyadingeka ukuze inyama yenyama, inyama yesinkwa kanye nokucutshungulwa kwe-offal.
Umswakama we-sausage owakwenzayo kukuvumela ukupheka inyama ye-sausage, amasoseji noma amasososi usebenzisa umgogodla wemvelo owehliselwa esihlokweni sombhobho futhi ugobe inyama enobisi.
I-buzz "i-kebbe" iyasiza ekwenzeni izinsafu ezithwetshiwe "kebbe" ezisuka kulundlu.
Ukuze uqiniseke ukuthi ukugxila kuhlale kuhambisana futhi kuphephile, i-grinder yenyama kagesi kufanele ifakwe ummese wensimbi ongenasici. AmaKhishi aphonswa, ahlaziye-ayenokwethenjelwa kunokwakheka okujwayelekile.
I-grinder ye-grinder yenyama kagesi iyindlela yokusebenza okungenani "ngamabili". Ngomqondo wokuthi izinyunithi ezinjalo zinezibhamu-imifino kanye / noma i-graters ngaphezu kwama-perforated grids ngenyama enobuthi. Amanye amamodeli afakwe ama-nozzle-ama-juicers, ama-choppers. Izithombe ezintsha zendawo yonke uZelmer, Moulinex, Tefal nabanye bakulungele ukunakekelwa.
Zifana nokufana neziganga zenyama zendabuko. Ngokwezinkomba ezinkulu zobuchwepheshe, "ama-universal" angase aphansi kancane, kodwa ngokuphawulekayo adlulise amayunithi wendabuko ngemisebenzi ehlukahlukene enikeziwe.
Isibonelo, uma ungakwazi ukubheka imifino ye-soup-mash kanye ne-grinder ye-meat evamile, bese uwasika nge-brusochkami ebushelelezi, imibuthano noma imigqa eqondile ngaphansi kwamandla kuphela yidivaysi ene-nozzle-yemifino. I-graters ekhethekile kalula ibhekane namazambane, izaqathe kanye noshizi kanzima. UMelnyka uyasiza ukugaya ikhofi nezinongo. Ukugaya inyama enamandla ngokushesha kugawula izinto ezimbi - okusanhlamvu, imbewu, amantongomane. Amamodeli ajwayelekile anesesekeli, okuvumela ukuba kusebenze ngisho nokuhlolwa, - ibhubhu yebhasikili.
Amadivayisi wendawo yonke yanamuhla aklanyelwe ngendlela yokuthi akukho ubunzima bokufaka nokushintsha kokunamathiselwe. Faka i juicer yeplastiki yezithelo namajikijolo esihlahleni se-meat grinder unit, ungakwazi ukuhamba ngomunye ngesandla - futhi ijusi elenziwe ngomumo lizogeleza ngqo eklasini. Kulula ukuguqula i-grinder yenyama kagesi ibe yinkinobho ye-citrus: isibonelo, intsha yokulinganisa i-Zelmer 986 yanele ukufaka udonga olungemuva bese ufake ibhulogi efanele esifubeni ukuze uthole ijusi elisha elifakwe ama-oranges nama-grapefruits.
Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi amandla okugaya inyama kagesi anamuhla aletha lezi zinto ezisondelene nabacwaningi bokudla.
Njengomthetho, abavuni abaningi bayakwazi nokucubungula inyama esitsheni sokusebenza, kodwa bayayenza ngosizo lwe-cutter grinder (ummese-umshini), kuyilapho i-mincemeat ivula i-puree. IKikhidi ihlanganiswa ne-auger-grinder ejwayelekile yezikhonkwane kuRolsen, Bosch, Philips, Moulinex. Futhi lizohlala isikhathi eside uma:
Ukupheka inyama yokucubungula. Susa izisulu namafilimu, i-cartilage namathambo amancane, usike inyama ibe yizicucu. Ngaphambi kokunetha inyama. Ngolwazi oluthambile olusetshenziselwa inyama enobisi, i-grinder yenyama isingatha kalula, isebenza ngaphandle kokulayisha ngokweqile. Sebenzisa i-pusher ukuze ukondle izinto zokusetshenziswa. Ungasebenzisi izinto zangaphandle: imimese, amafoloko, amafoloko, ama-scapula - angakwazi ukuphula indlela. Phakathi nomsebenzi uhlela i-unit "ukuhlonipha." I-grinder yenyama kagesi ayikwazi ukusebenza ngokuqhubekayo isikhathi esingaphezu kwengxenye yehora, futhi emandleni amakhulu, kuthatha okungaphezu kweminithi. Hlanza izingxenye ngesandla. Izingxenye zalo mishini azithunyiwe futhi zikhishwe, zimele zihlanjululwe futhi zome.
Yimuphi umkhiqizo ozokhetha i-juicer?
Izilungiselelo eziyisisekelo uma ukhetha i-TV
Indlela yokukhetha i-oil heater
Indlela yokukhetha i-TV yama-plasma?
Iphrinta ye-Laser: kusengokuqala
Ungakhetha kanjani i-dishwasher efanele?
Ukukhululeka okungcono kokuphazamiseka kwemizwelo nokucindezeleka kuyinto ukubhuka okuphelele
Amathiphu wokuthi ungakhetha kanjani i-mink coat
Ukunakekela izinwele, ubuso, umzimba
Ukulungiswa kwesibalo nge-ultrasound, i-cosmetology ye-hardware
Umlobi wezingane uCharlotte Bronte
Ama-coamel amakhukhi anamanci
Ukubalabala ngezinwele ezimfushane
Izihlahla kanye namaski ukunakekelwa kwesikhumba
Isinkwa sase-Ireland sinomvini omisiwe
Izici zokuthuthukiswa kwengane yakho
Ikhekhe lekhukhi "I-Fish"